Mpaghara ala a gbara mmiri ga-abawanye na mpaghara Samara - magazin "Potato System"
N'afọ a, ezubere ịmebata hectare 2,5 puku maka mmiri mmiri na mpaghara ahụ, gụnyere 1,9 puku hectare n'oge mmejuputa mpaghara mpaghara nke ọrụ gọọmentị etiti "Mbupụ nke ngwaahịa ugbo" nke ọrụ mba "Mmekọrịta mba na mbupụ mba ụwa", nke Onye isi ala Russia Federation Vladimir bidoro. Putin. Ihe kariri 1 puku hectare maka oru ubi ga-ewebata site na oru ugbo "Novoye Zavolzhie" na mpaghara Volga.
Gbara mmiri bụ ihe dị mkpa maka owuwe ihe ubi
Gọvanọ Dmitry Azarov kwusiri ike ugboro ugboro mkpa ọ dị ịmepụta usoro mmiri mmiri mpaghara: "Anyị ga-elebara anya na ọrụ ndị dị na mgbatị ala. Naanị ala ndị dị otu a na-enye mkpụrụ emere ga-ekwe nkwa, ya mere, ọ kacha nwee mmetụta akụ na ụba. " Dabere na Mịnịstrị nke Ugbo mpaghara ahụ, ugbu a ihe dịka ala hekta 24,5 dị n'okpuru mmiri. N'elu ala ubi a na-agba mmiri, 98% nke mkpokọta nduku mepụtara na ụlọ ọrụ ugbo na ọrụ ugbo (PFH) nke mpaghara (ihe ruru 125 puku tọn), 86% nke akwụkwọ nri (94 puku tọn), 55% nke soybean (15 puku tọn) toro. , 24% nke mkpụrụ osisi na beri kụrụ (karịa 3 puku tọn). Steeti na-agba ndi agraria ume ka ha webata otutu ala o kwere mee.
Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ ugbo na nri nke mpaghara ahụ bụ Nikolai Abashin kwuru na ekele maka mmejuputa atụmatụ nke mba ahụ, a na-enye ndị ọrụ ugbo onyinye ego ruru 70% nke isi ego maka owuwu na nwughari usoro mmiri mmiri. Mmemme gọọmentị etiti maka mmepe ala na-eme ka o kwe omume ịkwụ ụgwọ ruru 50% nke ntinye ego. Ọzọkwa, dịka usoro ihe omume mpaghara ahụ si dị, ugbo nwere ike ịnata enyemaka iji kwụghachi 20% nke ụgwọ mmiri (ọ bụrụ na nzukọ a na-ewu ma ọ bụ na-arụzigharị ụlọ ọrụ mgbapụta).
Na mpaghara ahụ n'afọ gara aga, emepụtara usoro ọhụrụ iji kpalite inyefe ala maka ịgba mmiri - nke a bụ inye onyinye maka mmepe atụmatụ atụmatụ maka nrụzi, nwughari na mmụba nke usoro ndị a. Na ngwụcha ọnwa Disemba, achọpụtara ndị otu ga-anata ego iji kwado ọrụ maka ịrụgharị na ala ubi nwere ngụkọta karịrị hekta 7,5.
"Taa, anyị na-ewebata ala maka mmiri nke na-adịghị n'okpuru mmiri kemgbe ọtụtụ iri afọ," ka onye ozi ahụ kwuru. - Ọrụ anyị bụ ịchekwa ngwangwa nke mmepe ala na ịkwalite usoro nkwado steeti maka ndị na-akọ ugbo. Ogologo nke usoro ndozi dị ugbu a na-eme ka o kwe omume ịgba puku hekta 45. "
Na mpaghara Samara, ọ bụghị naanị nnukwu ụlọ ọrụ, kamakwa obere ugbo na-emejuputa atumatu iji weghachite ma mepụta usoro ndozi. Yabụ, na mpaghara Volga, hekta 18 puku dị n'okpuru mmiri. Na 2019, ụlọ ọrụ ugbo "Sev-07" LLC rụrụ ọrụ teknụzụ nke usoro ogbugba mmiri n'ubi dị hectare 572, ugbo ugbo ugbo Tsiruleva E.P. - na mpaghara nke hectare 151. Onye oru ugbo na-ekwenye ekwenye Novoye Zavolzhye wuru ngalaba ohuru ohuru nke uzo mmiri na mpaghara 1,14 puku hectare dịka akụkụ nke mpaghara mpaghara nke ọrụ gọọmentị etiti "Mbupụ ngwaahịa ngwaahịa". Nke a bụ otu ụzọ n’ụzọ atọ nke hekta puku 3,5 na mpaghara ahụ ewepụtara maka ịgba n’afọ gara aga. Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ so na ndị isi na mpaghara mmiri.
Dabere na Nikolai Savenkov, onye isi Novoye Zavolzhye SEC, na 2018 ha mepụtara ọrụ mgbazigharị ala na mpaghara nke hectare 2,2 puku, yana mpaghara ala ubi nke ụlọ ọrụ ahụ bụ 5,1 puku hectare.
Nikolai Savenkov kọwara na “n'ọnwa Julaị, anyị bidoro usoro izizi nke usoro ogbugba mmiri n'ugbo na mpaghara nke hectare 570, na Nọvemba anyị nyere ọkwa nke abụọ n'otu mpaghara ahụ." - facilitylọ ọrụ nrụpụta nke ndị na-emekọ ihe ọnụ gụnyere na atụmatụ atụmatụ nke mpaghara mpaghara nke ọrụ gọọmentị etiti "Mbupụ nke ngwaahịa ugbo" nke ọrụ mba ahụ "mmekorita mba na mbupụ mba", ekele nke anyị nwetara enyemaka maka ọrụ ahụ na ego nke 76 nde rubles. " Dị ka ya si kwuo, nke a kwere ka ọ bụghị naanị ịmalite usoro mmiri mmiri mechiri emechi, nke bụ netwọk buru ibu nke pipeline na-agbanye ala, na hydrants na-adịgide adịgide nke mmiri na-abanye na mmiri mmiri na igwe mmiri mmiri, kamakwa ịzụta 12 mmiri mmiri. N'afọ a, na Mee na June, a na-ezube iwebata ihe karịrị otu puku hekta 1,16 ọzọ maka mmiri. Ndị nkwekọrịta ahụ na-akwadebe akwụkwọ iji nweta enyemaka ọzọ. “Nke a ga-enye anyị ohere ịzụta igwe 12 e ji asa mmiri. Na Septemba, anyị na-ezube ikpuchi hectare 361 ọzọ na usoro mmiri mmiri, "Nikolai Savenkov kwuru.
Ugbo na-eto soybeans, ọka ọka - ọka bali na ọka wit. Ha na-eme atụmatụ ịzụlite ọka. Nikolay Savenkov kwusiri ike na mgbazigharị ala nwere mmetụta dị ukwuu ma bụrụkwa ihe e ji n'aka maka owuwe ihe ubi ọbụlagodi na ọnọdụ ọkọchị.
Vasily Vasin, onye isi ngalaba "Osisi na iku osisi", prọfesọ nke Mahadum Samara State Agrarian:
- Ekwesịrị imegharị ala iji nye nkwụsi ike na mmepụta ihe ubi na ịkọpụta ihe ọkụkụ, ọkachasị nyere mgbanwe ihu igwe. Ọ dị mkpa ịnọgide na mweghachi nke usoro mmiri Spasskaya, nke e wuru na mpaghara Volga na njedebe 1960s. Mgbe ahụ, na mpaghara ọrụ ugbo dị egwu, usoro ịgba mmiri a ghọrọ isi iyi mmiri a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Taa, site na nkwado nke steeti na ọrụ ntinye ego nke ụlọ ọrụ ugbo, a na-arụ nwughari usoro nke ikike ya. Dị ka ọ dị na afọ ndị gara aga, mmepe ya na-arụ ọrụ dị mkpa maka akụ na ụba mpaghara ahụ, n'ihi na ịgba ala bụ ihe ubi a na-ekwe nkwa kwa afọ.
isi: "Volzhskaya Commune"
Tags: nduku na-etoogbugba mmiri n'ubiMpaghara Samara
Ingkụnye nduku n'oge mbụ na Krasnodar Territory na-aga n'ihu
Ukraine na-ebu amụma mbelata nke ihe ọkụkụ
Mmepụta akwụkwọ nri na nduku na Far East. Mkparịta ụka nke echiche mmepe ụlọ ọrụ